Xabad joojin lagaga dhawaaqay duleedka Gaalkacyo, Puntland & Galmudug oo….
May 21, 2020 Mahad Jama 12
GALKACYO(P-TIMES)- Deegaanka Taagare ee galbeedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa ka dhaqan galay xab joojin la kala dhex dhigay dhinacyadii dhawaan kuwada dagaalamay deegaankaasi, kuwaas oo kasoo kala jeeda dhinacyada Puntland iyo Galmudug.
Deegaanka Taagare ayaa waxaa gaaray masuuliyiin ka kala socotay Puntland iyo Galmudug waxaana qayb ka ahaa xubnaha gaaray xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiil sar sare, waxgarad iyo dhalinyaro, kuwaas oo halkaasi u tagay xal u raadinta shaqaaqooyinkii ka dhacay.
Wada hadal muddo dheer qaatay kadib waxaa masuuliyiinta iyo waxgaradka labada dhinacba ay ku guulaysteen in xabad joojin rasmi ah ay kala dhex dhigk dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Taagare ee goboka Mudug, waxaana loo saaray guddi labada dhinac ah oo ka shaqayn doona soo afjarida colaada Taagare oo muddo badan soo noq noqotay.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in 24-kii saac ee lasoo dhaafay xaalada deegaanku ay ahayd mid degan, waxaana dib ugu soo laabanaya dadkii ka barakacay kuwaas oo haatan u muuqda in ay nabad heleen.
Oo Galbeed oo aan u haaystey in aay tahay, jahada Goldogob
loo maro iyo Bariga oo dabcan ah qiyaasteeyda, dhanka Garacad ku beegan, reer Puntland ma Waqooyiga oo kali ah ayaa Gaalkacyo oga furan?!
War magaalada aad leedihiin 80% yaaysan marin, waddadii aay mareen, Dhuusamareeb iyo Ceerigaabo ee difaada!!
Asc ramadan kariim
Qofka fidmada ka shaqeynaya miyaadan soomin?
Fidmadu Waa ka xuntahay dilka.
Degaanka TEERRAGE wuxuu ku yaal 15km galbeedka Gaalkacyo. Halkaas waxaa fadhiya ciidan ka socda dadka dega galbeedka Mudug si ay xadka degaankooda uga ilaashadaan qolada koonfurta Gaalkacyo oo weligoodba damac kaga jiro dhulballaarsi iyo inay gaaraan xadka Itoobiya. Marka, mar kasta ciidanka Teerrage deggan ayey weerar ku qaadaan si ay u riixaan oo meeshaa uga kiciyaan. Intaas waxaa kasii daran mooryaan ka timaadda xagga Galmudug oo iyagoo koox koox ah wareegaya baadiyaha oo waxay arkaan dilaya ama dhacaya oo gawaarida jidadka u galaya.
Dhanka waqooyi-bari iyo Ballibusle waa sidoo kale oo beelaha Puntland waxay ku jiraan heegaan iyo difaac joogta ah.
Dadka waqooyiga Mudug in badan oo ka mid ah awooweyaashood waxay ku aasan yihiin dhul ilaa 100km Gaalkacyo ka xiga bari iyo dhanka Hobyo. Waana dhul ay degaan u lahaayeen boqollaal sano kahor intaan Keenadiid Hobyo imaan. Maantana galbeedka iyo waqooyi-bari ee Gaalkacyo ayey difaac kaga jiraan.
Waxaa kale oo la mid ah beelaha dega waqooyiga Galgaduud oo sidoo kale loogu riixay xagga galbeed.
Walaalaheen koonfurta Mudug iyo koonfurta Galgaduud ha ogaadeen inuu dhammaaday waqtigii udubka la isku riixi jirey, AK-na warkiisba daa. Ha iimaansadeen degaankooda ballaaran ee dheresan ilaa Badweynta Hindiya. ‘Dhulka Ilaahaa leh’ waa run, laakiin dad buu ku beeray. Xamarba Ilaah baa leh.
Salaam galbedka mudug reer baraxley ma ay Degaan ee waa kibir iyo dhulbalari. Dooxato bay malikasta dadka ku laayan waxaasna xarunta laga soo ababulana baraxley ku taala. Gudoomiyihi mudug sababa loo dilayna waxaa low ka ah reer baraxley wuxuu ku dhihijirey war dhulkiina ku eekada oo aan nabad ku noolano oo dooxatada joojiya. Allow ku naxariiso wuxuu ahaa geesi. Waa nation Darrow in Mantua dhabancad uu geeky dhulkaas dad aan shaqo ku lahayn waa nasiib xumo.
Sunnada Rabbaaniga ah waxaa kamid ah, in uu dhulka sii yaraanayo marba marka ka dambeeya, oo aay Baddu cunto.
Si taa lamid ah ayaa waxaad moodaa in uu soo yaraanayo Dhulka aay Soomaali degto inta uu Daarood ka dego, marba marka ka dambeeysa.
Taas oo aay muuqato in aaysan Daaroodku ku baraarugsaneyn. Laakiin aay muuqato in aay Soomaalida kale ku socoto talo la gorfeeyey, oo laga arkay natiijooyin hordhac ah!
Kuwaa oo ka kala dhacaya, NFD, Soomaali Galbeed, Gobollada dhexe iyo Gobollada Waqooyi ee Soomaaliya!!
Labo nin oo haddaad aragto nin Shaarkii isku haaysto, waxaa laga adkaaday, kan Shaarkiisu la isku haaysto, xitaa haddii uu difaacdo!
Dad Horor lagu yahay, oo Hurdo dheer ku jira iga dheh!!
Reerkaan hawiye hadafkooda waa sidii ay gacanta ugu dhigilahaayeyn gobolka mudug oo dhan. Waxaa bartilmaameed u ah Burtinle. Malahan caqli iyo garasho kaa celineysa. Sida keliyah la isaga dhicinkaro waa xabadda loogu roonaado.
Ninkii dhulkaaga kuugu yimaado waxay diinta kuu baneysey in aad difaactid cirdigaaga, dhulkaaga iyo sharafkaaga.
Haddaan habargidir si fiican loo edbin oo meel la iska dhigin naxariis, bani’aadamino iyo wax xeeris lagama yaabo in ay idin daayaan.
Middeeda kale qabaa’ilka dega waqooyiga mudug waxaa ka maqan isku xirnaansho adag iyo istaraajiyadka mideysan.
Soomaaliya weligeed Soomaali noqonmeyso, waa qabaa’ilo meel ku wada nool qabiilkii laga xoogbato dadka la raacsiinayo. Guul baan idiin rajeynayaa.
Maamulka Galmudug wucuu kooban yahay beelaha hawiye oo dhan waana qorshe laga leeyahay hadaf fog.
Halka maamulka Puntland uu yahay beelo kooban oo weliba is heesta dhexdooda.
Runtii Majeerteyn lagu yaqiiney dad caqli badan waxaad hadda moodaa in uu caqligii ka dhammaadey oo ay ku socdaan wado halis badan oo sababikarta in jiritaanka Daarood u halis galo.
War dadyahow indhaha kala fura oo hurdada aad ku jirtaan ka toosa.
Asc haddaan sax yar ku darsado rayigayga saliimka ah markaan akhriyey qormooyinkan meesha ku qoran runtii waa bogay oo weliba taageersanahay lkn waxaa ku darsan lahaa ilaahay qoom ma dulleeyo ilaa ay is dulleeyaan.
Puntland ilaahay wuxuu ku beeray dåd walaalo åh oo hål meel ka soo wada jeedadhammaanna deegaanada daarood markaad fiiriso xudduud Ina dhaxeeyo.
Ilaa gaarisa dooloow godey jigjiga dirirdhabe wardheer buuhoodle goldogob gaalkacyo dhabad ilaa caabudwaaq garacad dhanka bari ilaa gardafuul raasacaseyr ilaa iyo raaskamyooni kismaayo gedo buaale baardheere laasacaano galeen badhan ilaa iyo laasaqoray ceerigaabo ilaa iyo boosaassao ilaa iyo garoowe qardho ilaa iyo hawd waa deegaan daarood dåd baana ku nool.dhibku wuxuu ka jiraa daarood sax qaran qabiil ka tagey iskuna xirna ismana yaqaan qabiilada ku dhex nool dhib Ina heestaan lamana cunsuriyeeyo.maxaa loo baahan yahay isku xirnaan iska warqab tashi istraatiijiyo musrmtaqbal iyo wada hadal dhexdiisa åh
Haddey shiraan daarood ummaddoo dhan bas qaylisa waayo waxay ogyihiin xishooda .
Haddaba dhul balaarsiga hawiye sax talo u taalla daarood inay ogaadaan hurdadana ka kakacaan degaankaa ilaah ku siiyey mana imaan sanno isku xirnaanno dawlad gooni sameysanno midda kale siyaasiyiinta daarood ayagaa is eegta cadow isku ah
Habar gidir waa iska mooryaan. Maalin waxay yihiin alshabaab malinta ku xigtana waxay yihiin koox beeleed.
Waa dad iska liciif ah. Waxay u dhaqmaan sidii duurjoogta.
Marka ay dhargaan wey dhuuso badan yihiin oo kibir badan yihiin. Marka ay gaajeeysan yihiin wey baryo badan yihiin oo wey baqdin badan yihiin oo wey ku amaan gelin.
Waxaan u maleeyn waxaa la gaarey wakhtigii laga dhigijirey cayrta oo waxa ay haystaan laga dhici jirey si looga nabad galo
Tan kale Daarood waa WADA Naasaley, oo naaso waweyn ayey nimankoodu leeyihiin.
Waxna ha murugoonina daarood mar hore ayaa la rimi gacmeediyey
WAA run oo adeerkey bas wuxuu oran jiray allha u naxariistee markay nabad kugula hishiiyaan bay habeynkaas aad la gashey nabaddaa subaxdii dullaan bay kugu soo yihiin.waa dad aan dhaqan uyo diin lahayn mana yaqaannaan rabbi iyo deris wanaag waxay yaqaanaan xabbad iyo qoriga gunaciisa iyo inaad gumeyso
Daarood ha saneysto gole iyo urur u dooda xaqooda ilaasha Kyi degaankooda
Sababta kenaysa in aay moryan noqdan dhalinyarada Habargidir, intoda badan waxay kuso koren cuno xaraan ah oo dad muslin ah laga dhacay,mida kale Diin iyo cilmiga madiga ah lama barin,shaqo kalena mahaystan,sida Eay dureedka oo kale ayey werararayan waxay arkaan.